မြန်မာနာမည် - ဝီကီပီးဒီးယား
အောက်ပါ အကြောင်းအရာအခန်းဆက်၏ တစိတ်တပိုင်း
မင်္ဂလာ ၁၂ ခန်း
မြန်မာလူမျိုးတို့၏ အမည်ပေးစနစ်သည် ‌အနောက်တိုင်းအမည်ပေးပုံစနစ်နှင့် ကွာခြားသည်။ မိခင်သို့မဟုတ် ဖခင်၏အမည်ကို ယူ၍မှည့်ပေးလေ့မရှိသဖြင့် မြန်မာတို့တွင်မိသားစုနာမည် မရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ အစိုးရ၏ထောက်ခံမှုမရှိဘဲ မြန်မာတို့သည် မိမိတို့၏အမည်များကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲလိုက်သည်များလည်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မြန်မာတို့သည် "ဦး"၊ "ဒေါ်" စသော ဂုဏ်တင်သည့်အမည်များကို အသုံးပြုကြသည်။
မြန်မာအမည်များသည် ရှေးယခင်က စာလုံးတစ်လုံးတည်းသာဖြစ်သည် (သာဓက– ဦးနု၊ ဦးပု)။ ၁၈၉၀ ဝန်းကျင်တွင် အင်္ဂလိပ်ပညာရှင်များသည် မြန်မာလူမျိုးတို့က စာလုံးတစ်လုံးတည်းရှိသော အမည်များသာမှည့်ပေးနေခဲ့ကြစဉ် ရခိုင်တို့ကမူ စာလုံးသုံးလုံးအထိ မှည့်ပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ၂၀ ရာစုရောက်မှသာ စာလုံးနှစ်လုံးအထိ စတင်အမည်မှည့်ပေးခဲ့ကြပြီး ယခုအခါ အမည်များသည် စာလုံးသုံးလုံး၊ လေးလုံးအထိရှိလာသည်။ သမိုင်းပညာရှင်သန့်မြင့်ဦးသည်လည်း ကုန်းဘောင်အင်ပါယာ ပျက်သုဉ်းပြီးချိန်တွင် မြန်မာတို့သည် ပါဠိစကားလုံးများသာမက "မင်း" ဟူသောအခေါ်အဝေါ်ကိုလည်း နာမည်အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည် ဟုဆိုခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိဘအမည်များမှာ ဦးဖာနှင့်ဒေါ်စုတို့ဖြစ်ကြသည်။ အမည်ရင်းမှာ ထိန်လင်းဖြစ်သော်လည်း အစ်ကိုဖြစ်သူ အောင်သန်းကိုလိုက်၍ "အောင်ဆန်း"ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ သူ၏သမီးအမည်မှာ အောင်ဆန်းစုကြည်ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမည်မှ "အောင်ဆန်း"၊ ဖခင်ဘက်မှ အဖွားဖြစ်သူ ဒေါ်စုအမည်မှ "စု" နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်အမည်မှ "ကြည်"တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏သားအမည်မှာ အောင်ဆန်းဦးဖြစ်သည်။ သူ၏သားသမီးများကို "အောင်ဆန်း" ဖြင့် အမည်မှည့်ပေးခဲ့သောကြောင့် "အောင်ဆန်း" အမည်သည် မိသားစုအမည်ဖြစ်သည် ဟူ၍မှတ်ယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုသည်လည်း မိမိ၏သမီးများကို "စန်းစန်းနု"၊ "သန်းသန်းနု"၊ "ခင်အေးနု" ဟူ၍ "နု" အမည်ဖြင့် မှည့်ပေးထားသည်။ ယခုအခါ ထိုကဲ့သို့မှည့်ပေးမှုများ အနည်းအငယ်ရှိလာသည်။ သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် အများစုကမိမိနှစ်သက်သလိုသာ အမည်မှည့်ပေးလျက်ရှိကြသည်။
အချို့သောဗေဒင်ကို ယုံကြည်သောသူများသည် ဗေဒင်ဆရာအား မိမိကလေးငယ်၏ မွေးရက်ကိုလိုက်၍ အမည်မှည့်ပေးစေသည်။ သာဓကအားဖြင့် တနင်္လာနေ့တွင် မွေးဖွားသောသူကို "က" ဖြင့်စ၍ အမည်ပေးနိုင်သည်။ ထိုသို့နေ့နံအလိုက် အမည်ပေးပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
တနင်္လာ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င
အင်္ဂါ စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ဈ၊ ည
ဗုဒ္ဓဟူး လ၊ ဝ
ရာဟု ယ၊ ရ
ကြာသာပတေး ပ၊ ဖ၊ ဘ၊ ဗ၊ မ
သောကြာ သ၊ ဟ
စနေ တ၊ ထ၊ ဒ၊ ဓ၊ န
တနင်္ဂနွေ အ၊ ဣ၊ ဥ
အရှင်/အသျှင် Ashin Lord ရဟန်းများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ
ဗညား/ဗညာ Binnya, Banya မွန်အမည်
ဗိုလ်/ဗိုလ်ချုပ် Bo, Bogyoke Commander/General/Leader တပ်မတော်အရာရှိများ (သာဓက– ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
ဘုရား Baya/Phaya Lord/Excellency
ဒေါ် Daw Aunt/Ms. လူကြီးအမျိုးသမီးများ (သာဓက– ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
ဒူးဝါး Duwa Chief ကချင်ခေါင်းဆောင်များ (သာဓက– ဒူဝါလရှီးလ)
ကြီး Gyi Big/Great ဂုဏ်ကြီးကြောင်းပြသော နောက်ဆက်စကားလုံး
ခွန် Khun Mr. ရှမ်းနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအမည် (သာဓက– ခွန်ထွန်းဦး)
ကို Ko Bro/Mr. ရွယ်တူယောက်ျားများအမည် (သာဓက– ကိုမြအေး)
မ Ma Sis/Ms. ရွယ်တူမိန်းကလေးများအမည်
မန်း Mahn Mr ကရင်အမျိုးသားအမည် (သာဓက– မန်းဝင်းမောင်)
မယ် Mai, Me Lady/Ms. "မ" နှင့်ဆင်တူ
မောင် Maung (Mg) Young Mr/Master ယောက်ျားကလေးငယ်များ၏အမည် (သာဓက– မောင်မြ)
မိ Mi Ms မိန်းကလေးငယ်များ၏ အမည်ပြောင်
မိ Mi Ms မွန်အမျိုးသမီးအမည် (သာဓက– မိကလျာ)
မင်း Min Lord/King ဘုရင်များကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်း (သာဓက– မင်းတုန်းမင်း)
မင်း Minh မွန်ယောက်ျားကလေးငယ်များ၏အမည်
နိုင် Nai Mr မွန်အမျိုးသားအမည် (သာဓက– နိုင်ရွှေကျင်)၊ မြန်မာ "ဦး" နှင့်ဆင်တူ
နန်း (ၼၢင်း) Nang Ms ရှမ်းအမျိုးသမီးအမည်
နော် Naw Ms စကောကရင်အမျိုးသမီးအမည်
နမ့် Nant Ms အနောက်ပိုးကရင်အမျိုးသမီးအမည်
နန်း Nan Ms အရှေ့ပိုးကရင်အမျိုးသမီးအမည်
နန်း Nan Ms ရှမ်းအမျိုးသမီးအမည်
င Nga Mr ပုဂံခေတ်ယောက်ျားများ၏အမည်
စိုင်း Sai Mr ရှမ်းအမျိုးသားအမည် (သာဓက– စိုင်းထီးဆိုင်)
ဆလိုင်း Salai ချင်းအမျိုးသားအမည် (သာဓက– ဆလိုင်းထက်နီ)
စဝ် Sao Lord ရှမ်းတော်ဝင်မျိုးနွယ်များ (သာဓက– စဝ်ရွှေသိုက်)
စော Saw Lord ရှမ်းတော်ဝင်မျိုးနွယ်များ ("စဝ်" ကို မြန်မာမှုပြုထားခြင်း) (သာဓက– စောမွန်လှ)
စော Saw Mr ကရင်အမျိုးသားအမည် (သာဓက– စောဘဦးကြီး)
စ Sa Mr ကရင်အမျိုးသားအမည်
စော်ဘွား Sawbwa Lord ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ (သာဓက– သီပေါစော်ဘွား စဝ်ကြာဆိုင်)
ဆရာ Saya Teacher စာသင်ဆရာ သို့မဟုတ် ရာထူးကြီးသူများ
ဆရာတော် Sayadaw Royal Teacher ရဟန်းကြီးများ (သာဓက– လယ်တီဆရာတော်)
ဆရာမ Sayama Teacher စာသင်ဆရာမ သို့မဟုတ် ရာထူးကြီးသူများ
ရှင်/သျှင် Shin Lord/Madam ရဟန်းများ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ (သာဓက– ရှင်အရဟံ)
သမိန် Thamein Lord မွန်တော်ဝင်မျိုးနွယ်များ (သာဓက– သမိန်ဗရမ်း)
တက္ကသိုလ် Tekkatho University စာရေးဆရာများ (သာဓက– တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်)
သခင် Thakin Lord/Master တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်များ (သာဓက– သခင်ဘသောင်း)
သိပ္ပံ Theippan Science စာရေးဆရာများ (သာဓက– သိပ္ပံမောင်ဝ)
ဦး U Uncle/Mr လူကြီးအမျိုးသားများ (သာဓက– ဦးသန့်)
↑ Mi Mi Khaing။ "Burmese Names: A Guide"၊ The Atlantic၊ February 1958။
↑ Houghton, Bernard (July 1897). "The Arakanese Dialect of the Burman Language". Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland: 454. Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
↑ Thant Myint-U (2001)။ The Making of Modern Burma။ Cambridge University Press။ pp. 242။ ISBN 9780521799140။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Shorto၊ H. L. (1962)။ Dictionary of Modern Spoken Mon။ Oxford University Press။
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ ၅.၃ Moeng၊ Sao Tern (1995)။ Shan-English Dictionary။ ISBN 0-931745-92-6။
↑ Ahp 48 Great Lords of the Sky: Burma's Shan Aristocracy (2017-08-09)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနာမည်&oldid=744297" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။